Nhau - Njodzi uye kudzivirira kwemarudzi eprojekti emagetsi emagetsi
SHIRI yakaita simbi chirimwa hanger Lantern mubati Birdhouse pani
Simbi yekushongedza imba
Simbi yemadziro wachi
Simbi yemadziro kushongedza
Rusvingo rwekushongedza chirauro
Zvigadzirwa zvesimbi zvipfuyo
Pet Bowls & Vanopa
Pet leash mubati
Pet tsvina chiteshi
Metal mutambo zvishongedzo
Simbi yemadziro esherufu
Bhasikoro pani (A)
Ngozi uye kudzivirira kwemarudzi eprojekti emagetsi emagetsi
Wind Power Network Nhau: Iyo "Belt neMugwagwa" chirongwa chakagamuchira mhinduro dzakanaka kubva kunyika dziri munzira. Semugadziri mukuru wepasi rose uye mutengi wesimba rinowedzerwazve, China iri kuwedzera kutora chikamu mukudyidzana kwemagetsi emhepo epasi rese.
Chinese makambani emagetsi emagetsi ave achishingairira mumakwikwi epasi rese pamwe nekudyidzana, akasimudzira maindasitiri anobatsira kuti aende pasirese, uye akaona kuketani kwese kwekutengesa kwemhepo indasitiri yemagetsi kubva mukudyara, zvigadzirwa zvekutengesa, mashandiro uye mabasa ekuchengetedza kune ese mashandiro, uye vakawana mhedzisiro. .
Asi isu tinofanirwa zvakare kuona kuti nekuwedzera kwemapurojekiti epasi rose emagetsi emhepo nemakambani eChinese, njodzi dzine chekuita nemitengo yekuchinjana, mitemo nemirau, mihoro, nezvematongerwo enyika zvichatungamirawo. Maitiro ekudzidzira zviri nani, kubata, uye kudzivirira idzi njodzi uye kudzikisira kurasikirwa kusiri madikanwa kwakakosha zvikuru kumabhizinesi epamba kusimudzira kukwikwidza kwavo kwepasirese.
Iri bepa rinoita ongororo yenjodzi uye manejimendi manejimendi nekudzidza chirongwa cheSouth Africa icho Kambani A inodyara mukutengesa zvekushandisa kunze kwenyika, uye inokurudzira manejimendi kudzora uye kudzora mazano kune indasitiri yemagetsi emhepo mukufamba kwenyika, uye inovavarira kupa mupiro wakanaka ku hutano hwakanaka uye husingaperi hwekuvandudza simba kweChina simba remhepo indasitiri.
1. Models nenjodzi dzemapurojekiti epasi rese emagetsi emhepo
(1) Kuvakwa kwemapurazi emhepo epasirese anonyanya kushandisa iyo EPC modhi
Magetsi epasi rese emagetsi mapurojekiti ane nzira dzakawanda, senge iyo nzira iyo "dhizaini-yekuvaka" inopihwa kune imwe kambani kuitisa; mumwe muenzaniso ndeye "EPC mainjiniya" maitiro, ayo anosanganisira kubvumirana kunze kwekuwanda kwekubvunzana kwekugadzira, kutenga zvigadzirwa, uye kuvaka panguva imwe chete; uye Zvinoenderana nepfungwa yehupenyu hwese kutenderera kweprojekiti, dhizaini, kuvaka uye mashandiro eprojekiti zvinopihwa kune kontrakta kuti ishandiswe.
Kubatanidza hunhu hwemagetsi emagetsi, mapurojekiti emagetsi epasi rese anonyanya kutevedzera modhiraini yeEPC, ndokuti, kondirakiti inopa muridzi izere remasevhisi anosanganisira dhizaini, kuvaka, kutenga zvigadzirwa, kuisa uye kutumira, kupedzisa, gidhi rekutengesa -kubatanidzwa kwesimba remagetsi, uye kupihwa kusvika kumagumo kwewaranti nguva. Mune ino modhi, muridzi anongoitisa yakananga uye macro-manejimendi eprojekti, uye kontrakta anotora makuru mabasa uye njodzi.
Iyo yekuvaka purazi yemhepo yeKambani A yekuSouth Africa chirongwa chakagamuchira iyo EPC general contracting modhi.
(2) Njodzi dzeEPC general contractors
Nekuti zvibvumirano zvakatengwa kunze kwenyika zvinosanganisira njodzi senge mamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi enyika iriko chirongwa, marongero, mitemo nemirau zvine chekuita nekutengwa, kutengeswa kunze, mari nevashandi, uye matanho ekudzora mari yekunze, uye anogona kusangana nenzvimbo isingazivikanwe uye mamiriro ekunze, uye matekinoroji akasiyana. Zvinotarisirwa nemirau, pamwe nehukama nemadhipatimendi ehurumende nedzimwe nyaya, saka zvinhu zvine njodzi zvine huwandu hwakasiyana, hunogona kuve hwakakamurwa kuita njodzi dzezvematongerwo enyika, njodzi dzehupfumi, njodzi dzehunyanzvi, njodzi dzebhizinesi nehukama neruzhinji, nenjodzi dzehutungamiriri. .
1. Njodzi yezvematongerwo enyika
Mamiriro ezvematongerwo enyika enyika isina kugadzikana nenharaunda mune musika wechibvumirano unogona kukonzeresa kurasikirwa kukuru kune kontrakta. Iyo South Africa chirongwa chakasimbisa kuferefeta nekutsvagisa padanho rekutora sarudzo: South Africa ine hukama hwakanaka nenyika dzakavakidzana, uye hapana njodzi dzakavanzika dzakavanzika kune chengetedzo yekunze; China-South Africa kutengeserana kwenyika mbiri kwakawedzera nekukurumidza, uye zvibvumirano zvakakosha zvekuchengetedza zvine mutsindo. Zvisinei, nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu muSouth Africa yakakosha njodzi yezvematongerwo enyika yakatarisana neprojekti. Iyo EPC kontrakta mukuru anoshandisa huwandu hwakakura hwevashandi mukuita kweprojekti kuitisa, uye kuchengetedzeka pachedu nepfuma kwevashandi nevashandi ve manejimendi zvinotyisidzirwa, izvo zvinofanirwa kutarisirwa zvakanyanya.
Pamusoro pezvo, njodzi dzinogona kuitika mune zvematongerwo enyika, kusagadzikana kwezvematongerwo enyika, uye shanduko yehutongi zvinokanganisa kuenderera kwemitemo pamwe nekumisikidzwa kwezvibvumirano. Kurwisana kwemadzinza nevezvitendero kunoisa njodzi dzakavanzika kuchengetedzeka kwevashandi panzvimbo.
2. Njodzi dzehupfumi
Njodzi yezvehupfumi inonyanya kureva mamiriro ehupfumi hweiye contractor, simba rehupfumi renyika mune chirongwa, uye kugona kugadzirisa matambudziko ehupfumi, zvakanyanya maererano nekubhadhara. Inosanganisira akati wandei zvinhu: inflation, yekune dzimwe nyika njodzi, kuchengetedza, kusarura mutero, kusabhadhara kugona kwevaridzi, uye kunonoka kubhadhara.
Muchirongwa cheSouth Africa, mutengo wemagetsi unowanikwa mumarandi semari yekugadzirisa, uye michina yekushandisa mukutenga muchirongwa inogadziriswa nemadhora ekuAmerica. Pane imwe mwero wekutsinhana nenjodzi. Kurasikirwa kunokonzerwa nekushandurwa kwemutengo wekuchinja kunogona kupfuudza zviri nyore mari yeprojekti yemari. Iyo South Africa chirongwa chakakunda chikamu chechitatu chekubhadharisa mapurojekiti emagetsi nehurumende yeSouth Africa kuburikidza nekubhidha. Nekuda kwemakwikwi anotyisa emitengo, maitiro ekugadzirira chirongwa chebhidha chekuisa mukugadzira chakareba, uye kune njodzi yekurasikirwa nemidziyo yemagetsi turbine nemasevhisi.
3. Njodzi dzehunyanzvi
Kusanganisira mamiriro egeological, hydrological uye mamiriro ekunze, kupihwa kwezvinhu, zvekushandisa, zvekufambisa, njodzi dzekubatanidza grid, maratidziro ehunyanzvi, nezvimwe. Njodzi huru yehunyanzvi inosangana nemapurojekiti emagetsi emagetsi epasi rose njodzi yekubatanidza gridhi. Iyo inokwenenzverwa simba reSouth Africa simba remhepo rakabatanidzwa mune yemagetsi grid iri kukura nekukurumidza, kukanganisa kweanogadzira turbines pane magetsi system iri kuwedzera, uye magetsi grid makambani anoenderera nekuvandudza magidhi ekubatanidza grid. Uye zvakare, kuwedzera mashandisirwo emagetsi emhepo, shongwe dzakakwirira uye mashizha akareba ndiwo maitiro eindasitiri.
Tsvagiridzo uye mashandisirwo emhando yepamusoro-yeshure yemhepo turbine mune dzimwe nyika angori ekutanga, uye shongwe refu-refu kubva pamamita zana nemakumi matanhatu kusvika zana nemakumi matanhatu akaiswa mukushambadzira mumabatch. nyika yangu iri muchikamu chayo chehucheche ine njodzi dzehunyanzvi dzakanangana nhevedzano yezvinhu zvehunyanzvi senge yuniti yekudzora zano, kutakura, kuisa, uye kuvaka zvine chekuita neshongwe dzakakwirira. Nekuda kwehukuru hunowedzera hwemashizha, pane matambudziko ekukuvara kana mapundu panguva yekufambisa muchirongwa, uye kugadziriswa kwemashizha mumapurojekiti ekunze kunounza njodzi yekurasikirwa kwesimba remagetsi uye kuwedzera mari.
Post nguva: Sep-15-2021
Runhare: +86 139 0269 9943
Bvisa C Zongxin Industrial Park Shijie Hengjiao Shijie Dongguan 52301 China
Simbi Madziro Art, Bhachi Hanger Rack Hooks, Kiyi Hook Murongi, Makiyi Ekubata Hook, Dyara Pot Hanger, Wall Hanging Kudyara Bhureki,